ZayYarHlaing: Kaspersky Keys Downloader_v1.0
Kaspersky key တွေအတွက် အားလုံးလည်း တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ။ ကီးတွေကိုယ့်ဘာသာ ဒေါင်းနိုင်အောင်လေ။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အောက်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး double-click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပြထားတဲ့အတိုင်း ၀င်းဒိုးလေးတစ်ခု ပေါ်လာမယ်။ Get updates ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး နှိပ်လိုက်။ key အမျိုးအစားနဲ့ update လုပ်ပေးထားတဲ့နေ့ကို တွေ့ရမှာပါ။ မိမိသုံးမယ့် ကီးကို click တစ်ချက်ပေးပြီး Download ကိုနှီပ်လိုက်တာနဲ့ သိမ်းမယ့် နေရာရွေးခိုင်းပါတယ်။ ဇစ်ဖိုင်နဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည်ကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်မျိုးအတွက် အနည်းဆုံး ၇ ခုလောက် ရပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နည်းပါး update လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Kasper key အတွက် စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့ ….
တစ်ခုတော့ သတိထား … သူ့ဖိုဒါကို မဖွင့်ခင်ထဲက Kaspersky ကို exit ပေးထားလိုက်။ ကီးရပြီးရင် key downloader ကို ပိတ်လိုက်။ ပြီးမှ kaspersky ကို ပြန်ဖွင့်။ မဟုတ်ရင် unwanted software ဆိုပြီး ကိုက်သွားလိမ့်မယ်။
Download From Mediafire (Kaspersky Keys Downloader_v1.0)
Download From ifile (Kaspersky Keys Downloader_v1.0)
ဆန္ဒရှိသလို ဖော်ပြအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ …….
0 comments: to “ Kaspersky Keys Downloader_v1.0 ”
လိုချင်တာတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ Search Engines (15)
Pakokku sayardaw U Eindabawtha
Gmail မှာ Exe ဖိုင် တွဲပို့နည်း
Password တွေကို မမေ့အောင်….
10 Favorite “Best Photo Tips”….
Flowers near by City Hall
Day Time Moving Capture
My Shot, My Leg &4My Love.
အသုံးဝင်တဲ့ website လေးတွေ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အမ...
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ တို့မမေ့
Bye Bye Ox, Welcome Tiger
Using Photoshop to Testing Lighting
How2using Photoshop to Create the Illusion of De...
Bird's eye view 1( HDR )
DSC_0079 ( HDR )
DSC_0072 ( HDR )
About My First Time Group Outing
MyLightPainting 1 ( Model ... Than Zaw Min )
MyLightPainting2( Model ... Myself & Ko Aung )